MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Billing New Service Policy MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ယခု ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ အသစ်၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာ ပေးဆောင်ရန်ရှိသော ငွေတောင်းခံလွှာများအား ပုံမှန်ပေးဆောင်သော သုံးစွဲသူများသို့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး တို့အတွက်ဖြစ်သည်။
ငွေပေးချေမှု ဆိုင်ရာ မူဝါဒ အသစ်သည် လက်ရှိ ဈေးကွက်တွင် မိတ်ဆက်ရောင်းချထားသော GSM၊ CDMA၊ PSTN၊ ADSL၊ IP Star နှင့် FTTH ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် မှစတင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပေးဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေသော ရက်လွန်ငွေတောင်းခံလွှာများကို ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ ၃၁ရက်နေ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများအလိုက် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ အကျုံးဝင်ပုံ ဇယား
– ၀န်ဆောင်မှုစတင် အသုံးပြုပြီး နောက်လများတွင် သုံးစွဲသူထံသို့ ငွေတောင်းခံလွှာများ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
– ငွေတောင်းလွှာ၏ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရက်မှာ လ တစ်လ၏ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်ရက် ဖြစ်ပါသည်။
– ပထမတစ်လတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက အဝင်ခေါ်ဆိုမှုသာ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
– ဒုတိယလတွင်လည်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက အဝင် အထွက် ခေါ်ဆိုမှုများ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
– တတိယလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ၀န်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ပြန်လည် သုံးစွဲလိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ကာ ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း MPT မှ သုံးစွဲသူ ယခင် အသုံးပြုထားသော နံပါတ် ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့် ရရန် အာမခံပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
PSTN (Including Toll-free)
– ငွေတောင်းလွှာ၏ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရက်မှာ လ တစ်လ၏ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
– ဒုတိယ၊ တတိယ နှင့် စတုတ္ထလများတွင်လည်း သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက အဝင် အထွက် ခေါ်ဆိုမှုများ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
– ပဥ္စမလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ၀န်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ပထမတစ်လ နှင့် ဒုတိယတစ်လ တွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု ယာယီဆိုင်းငံ့ သွားမည်ဖြစ်သည်။
– တတိယလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ၀န်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်း သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
– ပြန်လည် သုံးစွဲလိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ကာ ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း MPT မှ သုံးစွဲသူ ယခင် အသုံးပြုထားသော နံပါတ် ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့် ရရန်အာမခံပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
– ဝန်ဆောင်မှုစတင် အသုံးမပြုမှီ သုံးစွဲသူထံသို့ ငွေတောင်းခံလွှာများ (Prepaid invoice) ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
– ငွေတောင်းခံလွှာ၏ သတ်မှတ်ထားသော နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရက်မှာ လ တစ်လ၏ နောက်ဆုံး အလုပ်လုပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်။
– ငွေတောင်းခံလွှာများ (Prepaid invoice) များကို သက်ဆိုင်ရာ လများတွင် ပေးဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ပထမလ၊ ဒုတိယလ နှင့် တတိယလအထိ ဝန်ဆောင်မှုများ ယာယီဆိုင်းငံထားခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။
– စတုတ္ထလတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ငွေတောင်းခံလွှာများ (Prepaid invoice) ကို ငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုအား ပိတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည် သုံးစွဲလိုပါက လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ကာ ကနဦးအစမှ ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ယခု ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအသစ် သည် လာမည့် (၁.နိုဝင်ဘာ.၂၀၁၈)ရက်နေ့ မှစတင်၍ အကျိုးသက်ရောက် မည်ဖြစ်သည်။
– ၂၀၁၈ အောက်တိုဘလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ပေးဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေသော ရက်လွန် ငွေတောင်းခံလွှာများ ကို စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
– ပေးဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသေးသော ငွေတောင်းခံလွှာများကို သတ်မှတ်ရက်အတွင် မပေးဆောင်ပါက မူဝါဒအသစ်ပါ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအတိုင်း ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် အပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
– ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရသော ဝန်ဆောင်မှုများသည် ပေးဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေသော ကြွေးကျန်များကို အပြီးဖြတ်တောက်ခြင်း မတိုင်မှီကာလအတွင်း အပြည့်အ၀ ပေးဆောင်နိုင်ပါက ဝန်ဆောင်မှုအား ပြန်လည် အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
– အပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းခံရသော သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအား ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက ကနဦးအစမှ အသစ်တဖန် ပြန်လည် လျှောက်ထားသွား ရမည်ဖြစ်သည်။
– အသေးစိတ်သိရှိလိုပါ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၁၀၆ (call center) ကို ဖြစ်စေ နီးစပ်ရာ TRA သို့မဟုတ် commercial ရုံးများတွင်လည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အမေးအဖြေများ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Night Safety Pack MM
ညဘက်မှာ ပုံမှန်အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အများဆုံး 1.5Mbps အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် MPTမှ Night Safety Data Packကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
1. What is MPT SMS Pack?
MPT SMS Pack is the very affordable SMS offer for MPT customers. Customers can buy SMS Pack by dialing *3103# or *106*3#
Product Name Price (Tax Incl) Specifications Usage Types Validity Subscription
MPT SMS Pack 299 Kyats 40 SMS On-net SMS 30 Days *3103#
2. Who can subscribe MPT SMS Pack?
All MPT GSM/WCDMA users can subscribe MPT SMS Pack.
3. Can I send SMS to other operators with this pack?
No. You can only send SMS from MPT to MPT with this pack.
4. What is the validity of MPT SMS Pack?
The validity of MPT SMS pack is 30 days.
5. What happens if I buy MPT SMS pack when I still have the same pack?
You SMS allowance will be merged and validity will be updated to latest expiry date.